Iindlela zokuhombisa- iBezzia | IBezzia
Kwicandelo le Amaqhinga okuhombisa Sizimisele ukukubonisa onke amathuba anokubakho ekhayeni lakho, ujonge kwizitayile nakwindlela ezihamba ngayo kodwa nakwiindlela zokufezekisa iziphumo ozifunayo kuhlobo ngalunye lwekhaya.
Ukwazi indlela yokudibanisa ifanitshala kunye nombala wodonga, izinto zokuhombisa kunye nezitayile zasekhaya okanye indlela yokuhombisa ikhaya kwitheko elikhethekileyo liya kuba yinxalenye yeli candelo, elijolise ekunikezeni izimvo kunye namanyathelo okuphumeza umhombiso ofunwayo.
Kwangokunjalo, siza kukubonisa ngemifanekiso ukuba loluphi uhlobo lwenkohliso onokuyenza, njengesikhokelo sotshintsho olunokwenzeka olwenzayo ekhayeni lakho.
Iingcamango zokudibanisa ibhokisi ye-litter yekati kwifenitshala
por UMaria vazquez yenzayo Iiyure ze3 .
Iibhokisi zenkunkuma yekati zizinto ezinzima kakhulu ukuzifaka kumakhaya ngendlela ekhangayo. Omnye ugqiba ukuzibeka apho...
Iindlela ezi-3 zokuthatha ithuba lokuvulwa kwefestile ye-bay
Iifestile eziphuma kwi-facade, zinegalelo ekudaleni imingxuma ngaphakathi kwindlu enokwenza kube nzima kuthi...
Awona manyathelo afanelekileyo ukwenza eyakho 'iGalari Wall'
Umkhwa wokuhombisa 'njengoDonga lweGalari' yenye yezona zinto zimangalisayo onokuthi uzinike…
Iintlobo ezintathu zezibane zokukhanyisa igumbi lakho lokutyela
Ngaba awuyazi indlela yokukhanyisa igumbi lakho lokutyela? Zininzi iindidi zezibane onokuzisebenzisa ukunika ukukhanya okuthe ngqo kwi...
Izitshixo zokuhlobisa igumbi lokuhlala ngesitayela solwandle
Ngeli xesha enyakeni, uninzi lwethu sele luphupha ngehlobo, ngeemvakwemini ezinelanga kunye neebhafu kwi…
Imibala emine eludongeni ukuqaqambisa izityalo zakho
Ngaba ungumthandi wezityalo zangaphakathi? Ngaba ubusonyusa inani leekopi ukwenza ikona eluhlaza...
Iingcamango zokudala ikona yokudlala kwigumbi lokuhlala
E-Bezzia siyazithanda ezo nkqubo zaseMelika apho igumbi lomdlalo liba yimeko ebalulekileyo ...
Iimpazamo ezi-5 akufanele uzenze xa uhombisa iindawo ezincinci
Ngaba unegumbi lokuhlala elincinci okanye igumbi lokulala ofuna ukulihombisa kwakhona? La magumbi anokuba ngumngeni omkhulu, yiyo loo nto namhlanje...
Ngexesha lokuvalelwa, abo bethu babenokonwabela indawo yangaphandle ekhayeni lethu babeziva benethamsanqa. Nokuba i…
Iimbono ezi-5 zeKrisimesi eluhlaza
Kwezi holide zeKrisimesi ukumoshakala kwemithombo yobutyebi kusanda ngokwanda. Kangangeminyaka, iKrisimesi ibifana ne ...
Imibono yamagumbi okuhlambela amancinci kodwa anesitayile
Ukuba unamagumbi okuhlambela amancinci ekhayeni lakho, akufuneki uyeke isitayile kunye nokuhombisa uninzi ...